Home Page - David Warin Solomons 'Catalog Music
Sanadihii la soo dhaafay ee 50 waxaan qoray oo ku saabsan qoraallada 4,800 iyo qorsheyaal - gabay, tonal, neo-classic, qaab, muuqaal, dabeecad, diineed, naxariis iyo murugo - muusikada noocyo badan.
Diiwaankani wuxuu ujeedadiisu tahay inuu kaa caawiyo inaad hesho wax kasta oo aad raadin kartid, haddii aad tahay wax sawir qaade ah, wax yaabahaaga ama dhagaystayaasha.
Fadlan ku raaxee, oo wadaag!
Wixii fiidiyo kale, cajalado iyo qoraallo - iyo sidoo kale muusikada by saaxiibo badan oo muusikada - fadlan tixraac Links Page
Cusub: Kirismaska ​​(iyo ciidaha kale ee qaboobaha) bogga
Cusub: Wax yar oo ABC ah oo ah bogga Renaissance
Dhanka kale, halkan waa dhowr fiidiyoow:
Passliglia loogu talagalay sextet flute
Passacaglia waa tartiib tartiib tartiib tartiib ah wakhti saddex mar ah oo leh basso ostinato, taas oo kala duwanaan karta.
Ereyga Talyaaniga ah "passacaglia" dhab ahaantii waxay ka timaadaa labada eray ee Isbaanishka ah ee la yiraahdo pasar iyo calle, oo tilmaamaya in waddada lagu socdo.
Qulqulka hoose wuxuu bixiyaa basso ostinato leh horumarkiisa horumarka iyo kuwa kale waxay ku riyoodaan iyagoo raacaya socodkooda tartiib tartiib ah.
Waxaa halkan lagu soo bandhigay jilayaasha loo yaqaan 'Budapest's Scoring' ee ka hooseeya Zoltán Pad oo ku yaala Studio-yada Hungarian.
Waxay ahayd lover iyo lass - ah gabogabo casri ah - loogu talagalay heesaha SATB
Waa heesta shakespeare ee magac isku mid ah laakiin adigoo isticmaalaya "My Dance Bell" sida muuqaalka loogu talagalay telefoonnada gacanta. Dadkan quruxda badani waxay ku socdaan xaafadaha dukaamada waawayn ee isweydaarsiga iyaga oo isticmaalaya telefoonadooda gacanta halkii ay ka heli lahaayeen beeraha cagaaran ee Shakespeare ee asalka ah. Waxaa halkan lagu soo bandhigay 'Composer's Choir' oo ka hooseysa Daniel Shaw.
Oo waxay ku socon doontaa silsilado xariir ah, waayo, waa carshiga axdiga iyo curadka
Kooxaha Waaweyn (66)
Isbahaysiyada naxdinta leh (73)
Wind Trios Quintets Sextets iyo Nonets (360)
Dabaysha kale ee dabaysha (29)
Afar Dabayl (129)
Isku-darka kale ee ku lug leh saxafoon (27)
Diyaargarowga afar degmo saxda ah (85)
Duetset Saxone (21)
Clarinet iyo Piano (39)
Clarinet (s) iyo qalab kale (77)
Quinetets quintet (170)
Flute iyo guitar (262)
Flute iyo qalab kale (121)
Foosto Duufaan ah (45)
Diiwangal leh qalabka kale (18)
Kombiyuutarada Diiwangaliyaha (11)
Qorshayaasha loogu talagalay qoob ka ciyaarka (56)
Sextets Strings iyo Sagaashooyinka (20)
Meelaha isku dhejisan (26)
Dhinacyada afar geesoodka ah (129)
Qalabka Klawiska (240)
Guitarka ah ee isku dhafan (199)
Saxafoon iyo Guitar (105)
Bassoon iyo Guitar (100)
Guitar iyo Cello (114)
Guitar iyo Violiin (104)
Guitar iyo Diiwaanka (86)
Duos loo yaqaan "corolla" iyo guitar (125)
Viola iyo Guitar (94)
Guitar iyo Oboe (39)
Guitar iyo Flute (307)
Guitar iyo Clarinet (240)
Shaqooyinka Vokawn iyo Kooriyeynta (598)
La Folia Isbeddelka (15)
Shaqooyinka Guriyeynta (107)
Shaqada Hawlaha - Codka Ragga ee Weyn (11)
Shaqada Guriyeynta - Codka raga - Riyaal (12)
Khudbadda Kulul ee Kulul (35)
Kooxaha Vocal Small (154)
Dejinta Ammaan ah (42)
Aasaas iyo qosol leh asalka (49)
Asal ahaan loogu talagalay Solo Voice iyo Guitar (133)
Codka kali ah qalabka kale ee la socda (8)
Qorsheynta codka Solo iyo Guitar (72)